Imvumelwano ayizukukuphumelela | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 1, 2008 NgeCawa, ngoSeptemba 30, 2012 Douglas Karr
Enye yeempikiswano endandinazo komnye wemisebenzi yam yayikukuyeka ukulandela into eyathethwa ngumntu wonke kwaye baqale ukwenza izinto ezintsha. Inyani yile ilandelayo enkulu into izakwenziwa ngaphandle nabani na ndiyicelile.
Ukuba ubuchule bokucwangcisa kukonwabisa wonke umntu, uya kuchitha lonke ulwazi onalo uzama ukwenza intengiso elandelayo, uqhubeke nokhuphiswano, yongeza amanqaku aceliweyo, okanye wenze uhlengahlengiso kubathengi abakhwaza kakhulu. Uza kusebenza ngokwakho ekufeni.
Ndingazenza ukufana kwezopolitiko zamva nje, kodwa kuyadika oko. Makhe sijonge endaweni yeAmerican Idol- apho abantu abaninzi bevota kunokhetho lukamongameli, nangayiphi na indlela. Ngaba ukuthengisa kuthelekiswa njani neevoti kwiAmerican Idol?
Iikopi ezizizigidi ezisi-7
Ezinye iintliziyo, uCarrie Underwood (ophumeleleyo, ixesha lesi-4)
Iikopi ezizizigidi ezisi-6
Ukuqhekeka, uKelly Clarkson (ophumeleleyo, ixesha loku-1)
Iikopi ezizizigidi ezisi-3
UDaughtry, uChris Daughtry (indawo yesi-4, ixesha lesi-5)
Iikopi ezizizigidi ezisi-2
Ndiyabulela, uKelly Clarkson
Umlinganiselo woMntu, uClay Aiken (umgijimi ophakamileyo, ixesha lesi-2)
Ukuhamba ngeCarnival, uCarrie Underwood
Iikopi ezizizigidi ezisi-1
Unomphefumlo, uRuben Studdard (ophumeleleyo, ixesha lesi-2)
Ikrisimesi emyoli nothando, Clay Aiken
Zikhulule, uFantasia (ophumeleleyo, ixesha lesi-3)
UDisemba wam, uKelly Clarkson
UTaylor Hicks, uTaylor Hicks (ophumeleleyo, ixesha lesi-5)
Ndifuna iNgelosi, uRuben Studdard
UJosh Gracin, uJosh Gracin (indawo yesi-4, ixesha lesibini)
Eyona nto iyinyani, iBo Bice (imbaleki-yexesha, ixesha lesi-4)
Iindlela eziliwaka ezahlukileyo, udongwe lweAiken
Intombazana encinci yaseKapa, ​​uKellie Pickler (indawo yesi-6, ixesha lesi-5)
U-Elliott Yamin, uElliott Yamin (indawo yesi-3, ixesha lesi-5)
Amaxesha amathandathu kunye nama-albhamu ezizigidi ezingama-30 + kamva, kuyathakazelisa ukujonga ukuba ngoobani abaphumeleleyo (kunye nabaphulukeneyo). UCarrie Underwood kunye noKelly Clarkson akhawunti phezu isiqingatha sentengiso iyonke.
Ngaba iyaphumelela loo nto? Kwiminyaka emi-6 'iimveliso' zenze isiqingatha sentengiso iyonke. Kwaye inye kuphela kwezo 'mveliso' yayikukuqhekeka ngokwenene. (U-Kelley Clarkson okoko waba ngu-Idol wokuqala.) Andinguye umlingisi weenkcukacha-manani, kodwa ukuba bendiza kwenza ivoti, iminyaka kunye nokurekhoda ukuthengisa ...
I-American Idol ngumboniso kamabonwakude ongcono kakhulu kunokukhangelwa kwetalente yomculo. Iintengiso ozibonayo zibulela ukuthandwa komboniso. Ngenxa yokungabikho komboniso, andiqinisekanga ukuba nayiphi na italente ngeyithengise ii-albhamu ezininzi njengoko besenzile.
Ngale ntsasa ndibone udliwanondlebe apho UCarly Simon Uthuthuzele uBrooke White ekufumaneni isihlangu phezolo. UCarly wamxelela ukuba aqhubeke esenza le nto ayenzayo. UCarly watsho nokuba uhlobo lukaBrooke lokubetha kwakhe yeyona nto ibalaseleyo awakhe wayiva.
Ingcebiso kaCarly yile (ichaziweyo):
Umninimzi we-American Idol akayena obalaseleyo okanye owahlukileyo, uyona uthandwa kakhulu.
Iitalente abazikhupha kuzo zonke iinkangeleko kwaye benza ngokufanayo (iDaughtry khange ihambelane nomthetho oyilwayo kwaphela!), Kodwa italente eyahlukileyo kulapho ikhoyo Ngabo bazobi abaya kuhlala ubomi bonke-abanye baya kuphelelwa ngamehlo (abanye sele benayo!).
Wayeza kwenza njani uBob Dylan kwiAmerican Idol? UDavid Bowie? Ulwamvila? Andiqinisekanga ukuba namnye kubo ngewenze umjikelo wokuqala. Kukubodwa kwabo okubaqhubayo, hayi amandla abo okujonga kakuhle kwikhamera kwaye babethe inqaku eliphezulu kwimizuzwana embalwa. Andithathi shoti zinexabiso eliphantsi kwitalente kwiIdol - ngabantu abanetalente emangalisayo kwaye bafanelwe lithuba labo lokuyenza ibe nkulu. Andinkqonkqozi italente. Ndinkqonkqoza inkqubo ekufanele ukuba ikhuphe iiIdols zaseMelika unyaka nonyaka.
I-American Idol inenzuzo njengeshishini lilonke. Umboniso kamabonwakude yenye yezona zibaleka iminyaka eliqela. Ngawo onke laa mandla, cinezela, ubungakanani babaphulaphuli, njl.njl. I-Idol kufuneka ibe yeyakho Iitshathi zebhodibhodi. Kodwa ukuthengiswa kwerekhodi yezithixo kuyaqhubeka ukwehla. Ngoba? Kungenxa yokuba unyaka nonyaka, basebenzisa imvumelwano ukufumana abaphumeleleyo.
tags: ixesha lokulayisha iphephaixesha lokulayisha iphephaimicimbi yemidiya yoluntuIsantya sewebhu
I-imeyile ayigqibi? Yongeza irekhodi le-SPF!
Meyi 1, 2008 kwi-8: 52 PM
Iposi enomdla. Ndicinga ukuba uninzi lwabantu lubangcono ngokukopa imodeli eyimpumelelo, nangona kunjalo, kwaye nokuba nenani elifanelekileyo lempumelelo ngayo. Ukuze ube nohlobo lwempumelelo lukaDylan kuya kufuneka ubekho ngokwahlukileyo, unetalente kwaye unethamsanqa. Ayisoze yenzeke ngaphezulu kokumbalwa.
Ewe ngekhe wazi, mhlawumbi ndim. 😉
Meyi 2, 2008 kwi-12: 23 PM
Ndicinga ukuba abantu 'bakhuselekile' bekopa imodeli enempumelelo kodwa andiqinisekanga ukuba bangcono. Nje ukuba unemodeli, kuya kufuneka ube nesizathu esinyanzelayo sokubonelela ngesibini okanye sesithathu okanye sesithandathu. Ndiyazibuza ukuba ingaba i-American Idol ayinakwenza ngcono na ngokuba nenguqulelo yelizwe kunyaka omnye, inguqulelo yelitye enye, i-hiphop enye… ukuthengisa.
Enkosi ngokuphawula- yingxoxo efanelekileyo!
Meyi 1, 2008 kwi-11: 30 PM
Ewe, ukuba ikhethekile yile nto ithatha ixesha lokuphila, emva koko siza kubona uTaylor Hicks ixesha elide, elide. Ngubani owaziyo ukuba uyakuze abemkhulu kangako, kodwa hes uya kuba phaya. Kwaye uninzi lwethu luyonwabile ngokwenene. Wahlukile kunayo nantoni na endakha ndayibona. Lithande ilizwi lakhe.
Ilizwi lokuqhekeza lelinye endilonwabeleyo.
Meyi 2, 2008 kwi-7: 47 AM
Kuyahlekisa bendisithi kumfazi wam phezolo i-American Idol ayivelisanga i-superstar enkulu yamaxesha ambalwa ngoku. UCarrie Underwood wayengowokugqibela (kwaye uSimon wayebonile ukuba wayeza kuba yeyona Idol ithandwayo). Ndicela umngeni kubabukeli abaninzi baseMelika ukuba babize (ngokulandelelana) abaphumeleleyo kwiAmerican Idol phezulu kwentloko yabo. Imalunga nokuthandwa… ngelo xesha. Umzekelo, ngubani ophumelele iSuper Bowl kwiminyaka emithathu edlulileyo? Ude wacinga ixesha elingakanani ngalonto?
Isilumkiso se-plug esingenazintloni: Logama nje sisesihloko seAmerican Idol, ukuba ufuna ukuhleka, jonga le ndawo umhlobo wam kwaye ndiqale kwiveki ephelileyo. Yibhlog emfutshane malunga nemithetho * sicinga ukuba bonke abagqatswa kufuneka balandele: http://ouridolrules.wordpress.com.
Meyi 2, 2008 kwi-12: 30 PM
Imithetho yethu yezithixo ihlekisa. Eyam yayiya kuba, “Thatha ukomba kuSimon. Abantu baya kuvota bembona ukuba uyacaphuka kwaye uyafeketha. ” Ukwenza emva kokuba uSimonizing wakho wokuqala ushiywe lixesha.
Unyanisile kunye nezinye izimvo ngokunjalo. USimon wayechanile: uCarrie; Nangona kunjalo, ndingongeza ukuba ukuthandwa kwakhe kuqhutywa bubuhle bakhe obumangalisayo, hayi nje italente yezwi. Andiqinisekanga ukuba wayeya kuba yiBillboard 100 ngaphambi kweli xesha levidiyo.
Meyi 2, 2008 kwi-1: 39 PM
Akuthandabuzeki ukuba impumelelo ka-Dylan yayingengokuba waye / wayeyimvumi enkulu kangaka. 🙂
Izisombululo zeBitWise, Inc.
Meyi 3, 2008 kwi-11: 03 AM
Emva konyaka wokuqala, akukho nto intsha malunga ne-American Idol. Ukuya kuthi ga ngoku ndikhathalele abantu ababakhethileyo ukuba babe kulo mboniso bonke baphumelele. Baqatshelwa kwiTV kwaye babhalise!